WARBIXIN: Kadib Raali Galintii Majalada France Football Ee Andres Iniesta, Wax Badan Ka Ogow Liiska 20-ka Halyay Ee U Qalbay Balse Aan Abid Ku Soo Guulaysan Ballon D’or-ka – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib Raali Galintii Majalada France Football Ee Andres Iniesta, Wax Badan Ka Ogow Liiska 20-ka Halyay Ee U Qalbay Balse Aan Abid Ku Soo Guulaysan Ballon D’or-ka
April 29, 2018 Mahamoud Batalaale
Majalada France Football ayaa shalay raali galin buuxda ka bixisay in Andres iniesta aanu ku guulaysan abaal marinta ay bixiyaan ee Ballon d’Or ee xidiga aduunka ugu fiican, wuxuuna madaxa France Football ee Pascal Ferré uu cadadkii shalay kaga hadlay sida ay uga xun yihiin in xidig Iniesta oo kale ahi aanu abalmarintan ku guulaysan isaga si cad raali galin u siiyay Iniesta. Haddii aanad akhrisan riix halkan. Raali galintii Pascal Ferré ee Iniesta.
Haddaba kadib raali galinta France Football ee Andres Iniesta waxaa jira xidigo kale oo si wayn ugu qalmay in ay ku guulaystaan abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or balse taas ayaan dhicin. Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa magacyada halyayo intii abaal marintan la bixinayay shaqo wayn soo qabtay balse aan lagu abaal marin wixii ay u qalmeen.
Andres Iniesta ayaa 22 sano oo uu ku soo qaatay Barcelona waxa uu ugu danbayn si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu dhamaadka xili ciyaareedkan ka baxayo Camp Nou isaga oo shir jaraa’id oo qiiro badan qabtay. Andres Iniesta ayaa Barcelona kula soo guulaystay koobkasta oo heerka kooxeed ah isaga oo waliba haysta rekoodho khaas ah oo aanu ciyaartoy kale gaadhin.
Waxyaabaha taariikhda Andres Iniesta lagu xusuusan doono waxaa ka mid ah in uu noqday xidiga kaliya ee taariikhda kubbada cagta ku soo wada guulaystay xidiga garoonka ee finalada koobka aduunka, koobka qaramada Yurub iyo waliba finalka Champions League, waana saddexda koob ee kubbada cagta ugu xamaasada badan.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinasya 20 xidig oo uu Andres Iniesta ka mid yahay oo baal dahabi ah ka soo galay kubbada cagta balse aan ku soo guulaysan abaal marinta xidiga sanadka ee Ballon d’Or iyada oo waliba qaar ka mid ahi ay min kaalinta labaad ilaa saddexaad abaal marintan ka soo galeen.
Waxaa liiskan ku jira xidigaha kubbada cagta soo maray intii la bixinayay abaal marinta Ballon d’Or ee aan haddana ku soo guulaysan abaal marintan inkasta oo ay soo muujiyeen sababta ay ugu qalmeen, halka ayaanad faah faahinta oo dhamaystiran kaga bogan kartaa.
1- Xavi Hernandez- Spain & Barcelona
Xavi Hernandez ayaa saddex jeer kaalinta saddexaad ka galay codbixinta abaal marinta Ballon d’or laakiin si walba oo uu koobkasta oo heer kooxeed iyo heer qaran ah ugu soo guulaystay waxay France Football iyo codbixiyaashu ku fashilmeen in ay hal Ballon d’or ku abaal mariyaan.
2- Raul Gonzalez- Spain & Real Madrid.
Rual ayaa waqti dheer ahaa xidiga abid goolasha ugu badan u soo dhaliyay Real Madrid ilaa intii uu Cristiano Ronaldo rekoodhkiisa jabinayay, waxa uu soo qabtay shaqo layaableh muddadii uu kubbada cagta ku dhex jiray laakiin sanadkii 2001 kii ayuu kaalinta labaad kaga dhamaystay codbixintii Ballon d’Or wuxuuna ku jiraa liiska halyayada aan abaal marintan helin.
3- Paulo Maldini- Italy & AC Milan
Maldini ayaa shan koob oo Champions League ah kula soo guulaystay AC Milan laakiin sanadihii 1994 kii iyo 2003 waxa uu kaalinta saddexaad ka galay codbixintii abaal marinta Ballon d’Or, waana halyay kale oo kubbada cagta soo maray oo aan abaal marintan la siin.
4- Gianluigi Buffon- Italy & Juventus
Gianluigi Buffon ayaa sanadkii 2006 kii markii uu xulka qarankiisa Italy kula guulaystay koobka aduunka waxa uu kaalinta saddexaad ka galay codbixintii abaal marinta Ballon d’Or laakiin uu ku jiraa liiska magacyada halyayada kubbada cagta ee aan lagu abaal marin Ballon d’Or inkasta oo waqti dheer heerka ugu saraysa ku soo ciyaaray.
5- Iker Casillas- Spain & Real Madrid
Casillas ayaa isaga oo kabtan ah xulka qarankiisa Spain ku hogaamiyay koobka aduunka iyo koobka qaramada Yurub, waxa uu koobab badan kula soo guulaystay kooxdiisii Real Madrid laakiin waxaa wax lala yaabo ah in aanu waligii ka soo xaadirin xaflada abaal marinta Ballon d’or oo aanu ku soo bixin saddexda xidig ee iskugu soo hadha.
6- Thiery Henry- France & Arsenal, Barcelona…
Halyaygii hore ee xulka qaranka France ee Thiery Henry oo xulka qarankiisa France kula soo guulaystay koobka aduunka isla markaana qayb muhiim ah ka ahaa kooxdii Arsenal ee koobka Premier League guuldaro la’aanta ku qaaday ayaan abid ku guulaysan Ballon D’or.
Henry ayaa koobab badan kula soo guulaystay Barcelona wuxuuna ka mid yahay xidigaha lagu tilmaamo kuwii kubbada cagta ugu fiicnaa laakiin marnaba looma dooran xidiga aduunka ugu fiican ee ay bixiso majalada dalkiisa France ee France Football.
7- Frank Lampard- England & Chelsea:
Lampard ayaa kooxdiisii hore ee Chelsea kula soo guulaystay koobka Champions League sanadkii 2012 kii laakiin markii ugu ugu dhawaaday abaal marinta Ballon D’or ayuu kaalinta labaad ka galay sanadkii 2005 kii.
8- Steven Gerrard -England & Liverpool:
Halyaygii hore ee kooxda Liverpool isla markaana ahaa kabtankii ugu da’da yaraa ee koobka Champions League sare ugu qaaday sanadkii 2005 kii kulankii layaabka lahaa ee Istanbul ayaan waligii isna ku guulaysan abaal marinta Ballon d’or inkasta oo uu kaalinta saddexaad codbixintii abaal marintan uu ka galay sanadkaas.
9- Andrea Pirlo- Italy & AC Milan, Juventus…
Halyaygii hore ee xulka qaranka Italy ee Andrea Pirlo oo ka mid ahaa xidigaha khadka dhexe ee kubbada cagta ugu fiicnaa oo qarankiisa ku soo hogaamiyay koobka aduunka isla markaana AC Milan kula soo guulaystay Champions League ayaan abid ka soo muuqan xaflada abaal marinta ee saddexda xidig ee iskugu soo hadha inkasta oo uu sidoo kale wacdaro ka sameeyay waqtigiisii Juventus.
10- Carlos Puyol- Spain & Barcelona:
Kabtankii hore ee Barcelona ee Carlos Puyol ayaa koob kasta oo heerka kooxeed ah sare ugu qaaday Barcelona, wuxuuna Spain kula soo guulaystay koobabkii qaramada Yurub si la mid ah koobkii aduunka ee 2010 kii laakiin waligii kamuu soo muuqan xaflada Ballon d’Or isaga oo aan marnaba ka mid noqon saddexda xidig ee iskguu soo hadhayay.
Haddaba akhriste liiska ciyaartoyda kubbada cagta shaqada badan soo galiyay ee aan haddana ku guulaysan abaal marinta Ballon d’Or halkan ka sii akhriso.
11- Franco Baresi– Italy & AC Milan- Kaalinta laabad ee Ballon d’or -sanadkii 1989kii
12- Ferenc Puskás– Hunry & Real Madrid- kaalinta laabad ee Ballon d’or -sanadkii 1960kii
13- Francesco Totti– Italy & Roma- Waligii saddexda xidig ee iskugu soo hadhay Ballon d’or kamuu mid noqon
14- Eric Cantona– France & Man United-kaalinta saddexaad ee Ballon d’or -sanadkii 1993kii
15- Dennis Bergkamp– Holland & Arsenal-kaalmaha labaad iyo saddexaad ee Ballon d’or -sanadihii 1992 & 1993kii
16- Ryan Giggs- Wales & Man United- Marnaba kaalmaha saddexda ah kumuu soo bixin
17- Roberto Carlos-Brazil & Real Madrid- Kaalinta laabad ee Ballon d’or- sanadkii 2002 kii
18- Alessandro Del Piero – Juventus & Italy- Waligii saddexda sare ee Ballon D’or kumuu soo bixin.
19-Bernd Schuster- Germany saddex jeer ayuu xaflada Ballon D’or tagay laakiin marnaba kumuu guuaysan.
20- Andres Indres Iniesta- Spain & Bacelona- Waligii kumuu guulaysan Ballon d’Or laakiin waxa uu ugu danbayn majalada France Football ka helay raali galin in aanu abaal marintan ku guulaysan.
Bilal Frank Ribery iyaa ka mudan in aad ka hadashan Puyol, Lampard,